Nagu saabsan - Milyan Sameeyayaal | MM Solutions INC, mm mm, mm mm, mm mm, inc.
Ujeedadayadu waa in aan xallinno caqabadaha ugu adag ee macmiilkeenna iyo in aan bixinno khibradaha ugu wanaagsan.
Xalka Soogalootiga ayaa la Bixiyaa: 22,156.
Xalka Sharciga: 19,132.
Xalka shirkadaha, waxaa lasiiyaa: 86,742
Shuruudaha Gudbi Ma u baahan tahay inaad ogaato
Adeegyada iyo Xalka
Iyada oo loo marayo khibradeena ballaaran iyo adeegyo kala duwan oo ay bixiso shirkaddeena sida aan kor ku soo sheegnay, waxaan ka caawineynaa shaqsiyaadka, qoysaska iyo ganacsatada iyada oo loo marayo khibradeheena gaarka ah in dib loo raro, la sii wado, la balaariyo oo la kobco, waxaan si fiican u qaabeysan nahay inaan kugu hagno wadada guusha. Haddii aad xiiseyneyso dib u dejinta, midaynta iyo helitaanka ama raadinta adeegsiga howlaha gadaal ee xafiiskaaga, raadinta raasamaal ama lammaane istiraatiiji ah ama aad raadsato qorshaha xiga ee jiilkaaga, la tashiga dhaqaalaha iyo taageerada ama raadinta adeegyada guryaha ama adeegyada la xiriira socdaalka ama waxbarasho dibedda ama xalalka IT-ga waxaan kaa caawin karnaa dhammaan adeegyada ku kaca qiimo aad u tartan badan.
Waxaan si cad oo hufan uga hadlaynaa geedi socodkayaga waxaana rajeyneynaa in qodobbada xigga ay ka jawaabaan dhowr su'aalood oo muhiim ah
Waxaa naga go'an anaga iyo anaga “Akhlaaqda ku wajahan macaamiisheena had iyo jeer waa midda koowaad”
Waxaan raacnaa hanaan nidaamsan, hufan oo habaysan oo ka shaqeeya danaha ugu wanaagsan Macaamiishayada iyo qoysaskooda sida ugu wanaagsan ee ugu macquulsan ee suurtogalka ah.
Waxaan u taaganahay dammaanad u ah Musharrax kasta, Shakhsi, Qoys, Ganacsi, Shuraako iyo Jaalayaal.
Xiriir dhakhso leh oo sax ah.
Xogta sirta ah aad ayey muhiim noogu tahay.
La cusboonaysiiyay oo ku saabsan shuruucda caalamiga ah ee hadda jira.
Waxaan nahay Xirfadlayaal aqoon u leh ganacsiga ganacsiga.
Xal u gaar ah dhammaan Macaamiishayada iyo qoysaskooda.
Sideen U Shaqaynaa
Waxaan fahmeynaa adiga, ganacsigaaga iyo yoolalkaaga gabi ahaanba iyo gebi ahaanba ka hor inta aan ka wada hadalno fursadaha ama fursadaha jira.
Waxaan ku shaqeynaa heerka ugu sareeya ee dareenka iyo sabirka macmiilkayaga, dhamaan su'aalahaaga waxaa looga jawaabayaa waqtiga ugu gaaban ee suurta galka ah ee xalka ugu fiican ee ku habboon shuruudahaaga iyo xaaladaada.
Had iyo jeer waxaan nahay himilo buuxda, gebi ahaanba iyo guul ujeedo.
Waxaan si gaar ah diirada saareynaa xalka ugu fudud uguna wanaagsan ee kaliya, macaamiisheena.
Iyaga oo leh isku xirnaan gaar ah iyo istaagida Warshadaha aan ku takhasustay, waxaan macaamiisheena siineynaa marin biyo-helis dhameystiran ee rajada.
Fadlan ka aqri nidaamka shaqo ee loogu tala galay macaamiisheena iyo shurakadayada shaqadeena .
Xalkayaga Shakhsiyaadka, Qoysaska, iyo Shirkadaha
Ganacsiga iibka / Iibsiga
Dhamaan Adeegyada iyo Xalka
96 Waddan iyo 28-ka Mareykanka
Xisaabaadka Bangiga ee 95 Wadamood iyo 28 Gobol oo Mareykanka ah
Waxaad leedahay ganacsi aad maamusho, aan kuu qabanno isku-murginta howlaha HR ee adiga adiga kuu gaar ah.
U adeegso Job Portal-kaaga lacag la’aan si aad u raadiso shaqaalaha meel kasta oo adduunka ah.
Xafiisyada Virtual ee 64 cinwaan oo xiisaha leh adduunka oo dhan
Logo Waxaa Diyaariyey Naqshadeeye Xirfadle $ 200
Bogagga Internetka ee Gaarka ah
Naqshad Ahaan Lagu Sameeyay iyo Nooc Gaar ah oo laga bilaabo $ 200
Aqbalida lacag bixinta 190 wadan
Nambar Virtual ah oo loogu talagalay 89 Waddan iyo 290 Magaalooyin.
Waxaan bixinaa xalalka CRM iyo is-dhexgalka si aan kuugu xoojino xakamaynta ganacsigaaga.
Ku leexo Wada-hadalka
Anaga Million Milyan-yaqaane waxaan marka hore diiradda saaraynaa sidii aan ganacsiga u guuleysan lahayn.
Waxaan la leenahay shabakad xoogan oo xiriir aan la leenahay hay'adaha maaliyadeed baahiyahaaga maaliyadeed ee raasamaalka ah.
Maalgelinta qalabkaagu wuxuu kuu oggolaanayaa inaad keydiso lacagtaada baahiyaha ganacsi ee kaladuwan.
Xirfadlayaasheena qiimeynta waxay leeyihiin khibrad ballaaran xagga xisaabinta, canshuuraha, dhaqaalaha iyo aragtida qiimeynta.
1000 + Mashaariicaha la dhammaystiray
Waxaan u diyaarinaa adeegyo sharciyeed qiimo jaban oo loogu talagalay Qoysaska, Shaqsiyaadka, Ardayda, Shirkadaha iyo Hay'adaha.
Waxaan ku siin karnaa nooc kasta oo adeeg maaliyadeed oo sharci ah.
Waxaan ka taageernaa Shakhsiyaadka iyo Shirkadaha sidii loo heli lahaa fursado iyo murashaxiinta, siday u kala horreeyaan.
Kooxdayadu waxay bixisaa xalal baaxad weyn oo ganacsi caalami ah
Waxaan kaa caawinaynaa inaad hesho hoggaamiyeyaal fulineed oo sax ah oo keenaya karti sare oo looga baahan yahay koritaanka ganacsiga.
Waxaan bixinaa adeegyo ballaaran oo kala duwan oo lagu caawiyo ganacsatada laga bilaabo qandaraasyada shaqada, maamulka HR, mushaharka iyo canshuurta.
Ka faa'iidayso aqoonta warshadeena iyo istaraatiijiyada shaqaalaynta ee la xaqiijiyay.
Waxaan ka taageernaa shaqsiyaadka iyo shirkadaha sidii loo heli lahaa fursado
Waxaan adeegyo iyo latalin la siinay ganacsatada si loo dejiyo ganacsi, ballaarin iyo kobcin.
Kooxdayadu waxay bixisaa xalal baaxad weyn oo ganacsi caalami ah kuwaas oo u oggolaanaya ganacsigaaga inuu si guul leh ku guuleysto.
Waxaan kaa caawinaynaa inaad hesho hoggaamiyeyaal fulineed oo sax ah oo keenaya karti sare oo looga baahan yahay koritaanka ganacsiga
Nambar Virtual ah oo loogu talagalay 89 Waddan iyo 290 Magaalooyin
Shirkadda iyo Naqshadeynta Hal-abuurka, Jawaab-celinta, Jihaynta iyo SEO-ga oo KARAA
Hal bixiye xalka xalka u siinaya bixinta xalalka ganacsiyada
Xallinta Ecommerce ee tayada caalamiga ah
Waxaa loo sameeyay barnaamijyo ka badan 351+ macaamiishayada caalamiga ah.
Injineeriyada alaabada softiweerka laga bilaabo latalinta ilaa horumarka, tijaabada iyo devOps.
Noocyada badeecadaada iyo badeecadaada internetka iyo jiilka hogaaminta.
Natiijooyinka mugga ganacsiga sare iyo dakhliyada
Xal u helista xajmiga 'Blockchain', iyadoo aan loo eegaynin wax soo saarkaaga.
Cusboonaysiinta aqoontaada laxiriirta adeegyo kala duwan oo aan bixinno.
Baro dhacdooyinka caalamiga ah.
Hel wararkii ugu dambeeyay ee socdaalka, waxbarashada, howlaha ganacsiga, HR, isbedelada ganacsiga caalamiga ah ee saameeya dhammaanteen, iyo wax intaa ka badan.
Ku casuun asxaabtaada, asxaabtaada, qoyskaagana sameyso ganacsi cusub iyo xiriiro bulsho.
Haddii aad ka faa'iideysaneyso mid ka mid ah adeegyadeena aan ka ahayn dadaalka habboon iyo adeegyada u hoggaansamida laguma soo dalacayo.
Xallinta Ecommerce ee tayada caalamiga ah.
Koontada Ganacsiga iyo Goobaha Lacag Bixinta iyo Goobaha Bixinta
Waxaan ku bixinnaa xallinta dhammaystirka irrid bixinta
Noocyada badeecadaada iyo badeecadaada internetka iyo jiilka hogaaminta
Waxaan ahay Mulkiile Ganacsi Madaxbanaan sideed ii caawin kartaa?
Iyada oo loo marayo khibradeena ballaaran, khibradda iyo adeegyo badan oo ay na siisay ururkeena iyo shirkadaheena, waxaan gacan ka geysanayey una fududeynay milkiilayaasha ganacsiga, shirkadaha iyo xornimada, iyo sidoo kale qoysaskooda si ay ugu biiriyaan shirkada isla markaana u aasaaso ganacsi cusub, ballaariyo, u kobcaan una sii wadaan ganacsigooda ama shaqo raadinta, waxaan si wanaagsan kuugu hananay inaan kugu hagno dariiqa guusha. Haddii aad xiiseyneyso isku dhafka iyo helitaanka, dib u dejinta, aad rabto inaad dib uga laabato howlaha xafiiska iyo howlaha, iskuday inaad hesho raasamaal ama lamaane istaraatiiji ah ama aad raadineyso qorshe jiilkaaga xiga, ama aad raadsato la-talin guryeyn ama Adeegyada Socdaalka ama Waxbarshada Dibadda ama IT Adeegyada aan kaa caawin karno dhammaan adeegyada sida kor lagu soo sheegay.
Waxaan adeegyo fara badan u fidinnaa macaamiisheenna caalamiga ah iyo kuwa aan iska kaashanno oo ay ku jiraan Shakhsiyaad, Maal-gashadeyaal, maal-gelin maalgashi / Sanduuqa VC, Shirkadaha iyo Hay'adaha. Incase, ee mashaariicda macquulka ah iyo mustaqbalka ee faa'iidada leh, waxaan ka caawin karnaa iskaashi faa'iido leh iyo fursado maalgelin sidoo kale, haddii loo baahdo.